Sômalilandy - Wikipedia
I Sômalilandy na Repoblikan' i Sômalilandy dia tany na firenena ao amin' ny Tandrok'i Afrika, nozanahin' ny Britanika taloha. Nanambara tena ho mahaleo tena ny vahoaka ao aminy tamin' ny taona 1991 fa tsy hiaraka amin' i Sômalia intsony ary ny lalàmpanorenany tamin' ny 30 Avrily dia tsy eken' ny fianakaviambe iraisam-pirenena. Ny fanjakana ao Sômalia anefa milaza fa mbola masi-mandidy amin' io tany io nanomboka tamin' ny fanovana ny fariparitry ny tanim-pirenena tamin' ny 2016. Atao hoe Soomaaliland na Jamhuuriyadda Soomaaliland izy amin' ny fiteny sômaly, أرض الصومال, Arḍ aṣ-Ṣūmāl na جمهورية أرض الصومال, Jumhūrīyat Arḍ aṣ-Ṣūmāl kosa amin' ny teny arabo.
Sainam-pirenen' i Sômalilandy
I Sômalilady ao Afrika
Manana velaran-tany mirefy 137 600 km² i Sômalilandy. Ireto ny firenena mifanolotra aminy: i Sômalia, i Etiôpia, i Jibotỳ ary i Iemena (ny Helodranon' i Aden). Misy mponina 3 500 000 any ho any ny ao. I Hargeisa no renivohiny izy misy mponina 800 000 any ho any.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Sômalilandy&oldid=1040830"
Dernière modification le 3 Desambra 2021, à 15:31